एकै खेलमा रोनाल्डोको ४ गोल !! अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्यामा रोनाल्डो ९३ !! - Just another WordPress site
एकै खेलमा रोनाल्डोको ४ गोल !! अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्यामा रोनाल्डो ९३ !!
जारी यूरो २०२० छनोट चरणको छैटौ चरणको खेल पोर्चुगल विरुद्ध लिथुनियामा पोर्चुगलले ५-१ ले विजयी भएको छ ।
पोर्चुगलको जितमा रोनाल्डोले पूर्ण ७८ मिनेट खेल्दा ४ गोल गर्न सफल भएका थिए । उनले खेलको ७ औ मिनेटमा पोर्चुगलका निम्ति गोलको खाता खोलेका थिए । पहिलो हाफको २८ औ मिनेटमा लिथुनियाका आन्द्रिसकेभिसिय्सले बराबरी गोल फर्काएका थिए ।
दोश्रो हाफको ६१ औ मिनेटमा पुन रोनाल्डोको प्रहार लिथुनियाका गोल रक्षकको शरीरमा लागेर गोल हुन पुगेको थियो जुन गोल सुरुवातीमा अधिकारिक रोनाल्डोको गोल मानिएको थिएन् । खेलको उतरार्धमा उक्त गोल रोनाल्डोको नाममा नै पुन दर्ता भएको थियो । रोनाल्डोले पुन ६५ र ७६ औ मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई ४-१ को अग्रता दिलाए ।
उनले ७८ मिनेटमा अतिरक्त खेलाडीको रुपमा मैदान छाडेका थिए । खेलको अन्तिम ९०+२ मा पोर्चुगलका विलियनले गोल गर्दै टिमलाई ५-१ को जित दिलाए । जित संगै पोर्चुगलले युक्रेनसंगको दुरी कम गर्न सफल भएको छ । पोर्चुगलले समुह बि बाट ८ अंक जोड्न सफल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय गोल संख्यामा समेत रोनाल्डोले ९३ औ गोल पुरा गरेका छन् ।